भुवन दिदीबाट धेरै सिकेँ : मिरुना मगर
वि.सं २०७७ श्रावण २४ शनिबार
Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७६ भदौ १ आइतबार ११:१२:००
‘साइनो’ मेरो चौथो फिल्म हो । नेपालकी प्रथम अभिनेत्री भुवन चन्दले निर्माण गरेको फिल्म खेल्न पाउँदा खुसी छु । भुवन दिदीसँग काम गर्दा धेरै कुरा सिक्ने मौका पाए“ । उहाँहरूले नेपाली फिल्म उद्योगलाई दिएको योगदानबारे नजिकबाट महसुस गर्न पाएँ ।
पुराना कलाकारसँग अनुभव हुन्छ । उहाँहरूसँग काम गर्दा सिक्न पाइन्छ । फिल्मका स–साना कुरामा ख्याल राख्नुहुन्छ, सुझाब दिनुहुन्छ । भुवन दिदी हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ । नयाँ–पुराना दुवै कलाकारको अभिनयको हिसाबमा भने उस्तै लाग्दो रहेछ ।
पुराना कलाकारसँग अनुभव हुन्छ । उहाँहरूसँग काम गर्दा सिक्न पाइन्छ । फिल्मका स–साना कुरामा ख्याल राख्नुहुन्छ, सुझाब दिनुहुन्छ ।
मेरा अघिल्ला फिल्महरूले बक्स अफिसमा खासै चर्चा बटुल्न सकेका थिएनन् । ‘साइनो’बाट भने मेरो धेरै अपेक्षा छ । एउटा कलाकारका कारणले मात्रै फिल्म चल्ने या नचल्ने हुँदैन । सिंगो टिमले जस्तो आउटपुट दिन्छ, त्यसैअनुसार फिल्म चल्ने हो । कलाकारले त अभिनय गर्ने, राम्रो पर्फर्मेन्स दिने हो ।
आफूले गरेको काममा आफूलाई नै बढी विश्वास हुने हो । ‘साइनो’को कथा राम्रो छ । यसमा म ग्रामीण युवतीको भूमिकामा देखिएकी छु । पारिवारिक र सामाजिक बन्धनसँग संघर्ष गरेकी छु । आफ्नो भूमिका यथार्थ भएकाले पनि दर्शकले मन पराउनेमा ढुक्क छु ।
#साइनो # भुवन चन्द # मिरुना मगर
कलाकारको थाङ्का साइनो
विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव : धनगढीको बर्मेली साइनो
रहेनन् डिपी त्रिपाठी, यस्तो थियो नेपाल साइनो
होडिङ बोर्ड हटाउने निर्णय रोक्न व्यवसायीको माग
दिदी साइनो लगाउनेबाटै बीस लाख फिरौती माग
‘साइनो मौलिक कथा हो’
मुसहर बस्तीमा गुन्डा लगाएर आक्रमण, प्रहरीले विनाकारबाही छाडिदियो
तराईमा अब लकडाउन गरे पनि नियन्त्रण हुँदैन, यही तालले काठमाडौंमा पनि ‘डिजास्टर’ हुन्छ : डा. अनुप बास्तोला
‘डा. केसीलाई सामान्य सोधपुछ मात्र’
कोरोना संक्रमित थप पाँच जनाको मृत्यु, कोरोनाबाट निधन हुनेको संख्या ७० पुग्यो
कोभिड–१९ महामारीपछि हवाई उडानमार्फत विदेशबाट ४५ हजार ६ सय ७३ नेपाली फर्किए (सूचिसहित)
२० दिनदेखि आमरण अनशनमा युवा : कहाँ छ सरकार ? कहाँ छ जागरण ?
कोरोना संक्रमित थप तीन जनाको मृत्यु, हालसम्म ७३ जनाको निधन
शनिवार प्रदेश १ मा थपिए ६१ संक्रमित
काठमाडौं उपत्यकामा थप ६२ जना संक्रमित
शनिबार कर्णालीमा पाँच संक्रमित थपिए
कोरोना मिटर : थप तीन सय ७८ जनामा संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या २२ हजार पाँच सय ९२ पुग्यो
दरबार स्क्वायरमा साझा पार्टीकाे नाटक(फोटोफिचर)